पाटन अस्पतालमा एक युवकको मृत्यु, कोरोना पुष्टि हुन बाँकी
काठमाडौँ । ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कोरोना आशंका गरिएका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । अस्पतालको आइसीयूमा राखेर उपचार गरिरहेका धादिङ खनियाँपानी घर भएका ३५ वर्षीय युवकको सोमबार मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । उनी चैत १४ गते मात्रै भारतबाट नेपाल फर्किएका थिए । पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले ती युवकको...
काठमाण्डौ । लकडाउन अवधिभर धितोपत्र बजार पनि बन्द हुने भएको छ । सरकारले आइतबार लकडाउनको अवधि चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले लकडाउनलाई पहिलाभन्दा थप कडा बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । यो निर्णयसँगै धितोपत्रको दोश्रो बजार कारोबार के हुने भन्ने लगानीकर्तामा अन्यौल रहेको बेला नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड(नेप्से)ले...
काठमाण्डौ । कोभिड १९ संक्रमणबाट विश्वभर पछिल्लो १८ घण्टा मृत्यु हुनेको संख्या २७०० पुगेको छ । योसँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको कुल संख्या ३३ हजार ५५० पुगेको छ । कुल संक्रमितको संख्या ७ लाख १० हजार पुगेको छ भने पछिल्लो १८ घण्टामा मात्र विश्वभर ४७ हजार २०० बढी नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । विश्वभरमा अझै पनि २६ हजार ७०० बढी...
काठमाण्डौ । सरकारले दैनिक रुपमा आयात हुने सुनको कोटालाई आधा घटाइदिएको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले आइतबार पारित गरेको राहात प्याकेज अन्तरगत सुनको दैनिक कोटामा कटौति भएको हो । साबिकमा दैनिक २० केजी रहेको सुनको कोटा घटाएर १० केजीमा झारिएको छ । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि दैनिक सुन आयातको कोटा बढाउने माग गरिरहेका थिए । तर,...
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएपछि राहातको घोषणा गर्दै सरकारले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) तिर्ने अवधि बढाइदिएको छ । विशेष राहात प्याकेज घोषणा गरेको सरकारले फागुन महिनामा तिर्नुपर्ने कर अब बैशाख २५ गतेसम्म तिर्न सकिनेछ । राहात घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक राजश्वतर्फ पनि...
काठमाण्डौ । सरकारले तत्कालका लागि महंगा गाडीहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावसँग जुँधिरहेको सरकारले ५० हजार डलरभन्दा माथि मूल्य पर्ने सवारी साधनको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो विषयमा जानकारी गराएका हुन्। यस्तै, सरकारले सुनको पैठारी दैनिक २० किलोलाई...
काठमाण्डौ । दैनिक उपभोगका लागि चाहिने चामल, दाल, तेल, नून लगायतका अति आवश्यक खाद्यवस्तुको हाल कायम मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिएर बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आइतबार घोषणा गरेको राहात प्याकेजमा कोरोना संक्रमणका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरुको सहुलियतका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले...
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले इन्टरनेट, विद्युत, खानेपानीको शुल्क देखि निजी विद्यालयको मासिक शुल्कमा समेत छुट दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार मन्त्रीषरिषदबाट पारित राहात प्याकेजको घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छुट तथा सहुलियतका विषयमा जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार निजी...
काठमाण्डौ । शहरी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुले घरधनीलाई चैत महिनाको भाडा बुझाउन नपर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले चैत महिनाको एक महिनाको भाडा कोठामा बस्ने श्रमिकहरुको हकमा मिनाहाको व्यवस्था मिलाउन शहरी क्षेत्रका घरधनीहरुलाई आग्रह गरेको हो । यसरी घरधनीले मिनाहा गरेका १ महिनाको भाडाको सरकारले घरबहाल कर नलिने घोषणा समेत गरिएको छ...
काठमाण्डौ । उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्नेहरुले न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु रहने गरी कम्बो प्याक बनाएर मात्र सामान बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । आइतबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु,...
काठमाण्डौ । सरकारले जारी लकडाउनलाई चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । भर्खरै सकिएको मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै लकडाउन २५ गते राति १२ बजेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले चैत ११ गते मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभरका...
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्र बुस्ट हुने गरी राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा ऋणिहरुका लागि १९ बुँदे बम्पर राहात प्याकेज घोषणा गरेको छ । राष्ट्रबैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा आइतबार कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रबैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरुको छलफलबाट संभवत इतिहासकै...
ज्वरोका बिरामी लिन नमान्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाण्डौ । ज्वरो आएका बिरामीहरुलाई भर्ना गर्न नमान्ने जुनसुकै अस्पताल र त्यस्ता बिरामीलाई रेफर गर्ने डेडिकेटेड अस्पतालहरुमाथि सरकारले कारबाही गर्ने संकेत गरेको छ। पछिल्लो समय देशका कतिपय अस्पतालहरुले ज्वरो आएका बिरामीहरुलाई गेटभित्रै प्रवेश गर्न नदिएका खबरहरु बाहिरिएसँगै सरकारले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाप्रति कडा रुपमा...
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमण हुनसक्ने बिरामीहरुको स्वास्थ्य जाँचमा सरकारले हदैसम्मको लापरबाही र बेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा स्थापित बुटवलको कोरोना विशेष(अस्थायी) अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएका एक व्यक्तिको आइतबार बिहान मृत्यु भएपछि शंकास्पद कोरोनाका बिरामीहरुको...